ရှင်ပင်ပက်လက် ရေစက်လက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှင်ပင်ပက်လက် ရေစက်လက် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့နယ်တဝိုက်ရှိ ထူးခြားထင်ရှားသော နေရာဖြစ်ပြီး လူသူအရောက်အပေါက်နည်းသည်။ ပြည်မြို့ အနောက်ဘက်ကမ်း ဖိုးဦးတောင်အနီး၌ ရှိပြီး အစောင့်အရှောက်ကြီးပြီး ခေါင်သဖြင့် တကူးတက သွားလိုပါက ပြည်​ဈေးကြီးဆိပ်ကမ်းမှ စက်လှေဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်း တောင်မှ မြောက်သို့ ၂ နာရီနီးပါး ဆန်တက်ခုတ်မောင်းရသည်။ ရှင်ပင်ပက်လက်သို့ တက်သည့် ကမ်းနဖူး၌ သဲဖြူလွလွများ ရှိပြီး နေ့ခင်းတွင် အလွန်ပူလေသည်။
အပြာရောင်သန်းနေသော မြင့်မားလှသည့် ကျောက်နံရံကြီး၏ ထိပ်တနေရာမှ ရေသွယ်တန်းကလေး အဆက်မပြတ်အောက်သို့ စီးကျခြင်းကို အစွဲပြု၍ ရေစက်လက် ခေါ်သည်။ စီးကျနေသော ရေသွယ်တန်းအောက်တည့်တည့်၌ သလွန်သဏ္ဌာန် ကန်ငယ်တခု ရှိပြီး၊ အလျား ၄ တောင်၊ အနံ ၂ တောင် တထွာခန့်၊ အနက် ၂ တောင် နီးပါးခန့် ရှိကာ ကန်ပတ်လည်၌ ကနုတ်ပန်းများ ရေးဆွဲထားသည်။ ရေညှိများ အထပ်ထပ်တက်နေရကား ကန်ခြေတခုလုံး အစိမ်းနုရောင် ပေါက်နေသည်။ ကန်အတွင်းရှိ ရေသည် ကြည်လင်အေးစက်နေပြီး၊ အထဲ၌ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တဆူကို ပက်လက်အနေအထားဖြင့် စမ်းသပ်တွေ့ရှိရသောကြောင့် ရှင်ပင်ပက်လက် ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေပေါ်မှ ကြည့်လျှင် ဝိုးတဝါးသာ မြင်ရ ပြီး၊ ပျူခေတ်လက်ရာဟု သိရသည်။
ထိုအခါ ကျောက်နံရံကြီးထိပ်မှ ကျသော ရေစက်တန်းသည် ကန်အတွင်းသို့ ကျသည်။ ရုပ်ပွားတော်မြတ်၏ ကျောအောက်၌ ရတနာမျိုးစုံပါ သေတ္တာရှိကာ ချက်တော်၌လည်း သိဒ္ဓိဝင်ပစ္စည်းတမျိုး ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ရေစက်တန်း၏ ထူးခြားချက်မှာ လူသံသူသံ ပေးပါက ပိုကျလာတတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကန်ထဲက ရေကို သစ္စာပြု အဓိဋ္ဌာန်ထား၍ သောက်ပါက ဆေးဖက်ဝင်သည်ဟု ဒေသခံများက ယုံကြည်ကြလေသည်။
↑ ဦးကျော်(ပြည်) (အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၁). "ရှင်ပင်ပက်လက် ရေစက်လက်". နက္ခတ္တရောင်ခြည်.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှင်ပင်ပက်လက်_ရေစက်လက်&oldid=347797" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇၊ ၀၁:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။